Imvilophi Ukulala Izikhwama Abakhiqizi - China Imvilophu Yokulala Izikhwama Abahlinzeki & Ifektri
Imibala eqinile yesikhwama semvilophu eyodwa yokulala enesigqoko esikhiphekayo se-OEM
Lesi yisikhwama sokulala semvilophu esinemibala ehlukahlukene nemisebenzi ekhethekile. Idume kakhulu emazweni amaningi ngoba akusona lesi sikhwama sokulala kuphela esingasetshenziswa lapho uyokhempa, kepha nasekhaya. Indwangu engaphandle yalesi sikhwama sokulala yenziwe ngezindwangu zenayiloni ezingama-20D 320T noma ezingama-20D 380T. Indwangu ngayinye iphathwe ngokukhethekile, okungaba ukumelana nokudiliza nokumelana namanzi. Inokumelana nomoya okuqinile, okwenza umkhiqizo uqine futhi kube lula ukuwuhlanza. Indwangu yangaphakathi yalesi sikhwama sokulala nayo ingu-20D 320T noma i-20D 380T yendwangu yenayiloni.
Ukuthungwa okungabili kwemvilophu isikhwama sokulala okungajwayelekile kungagcwaliswa phansi ebusika
Lesi yisikhwama sokulala esithandwa kakhulu esinesitayela sokuklanywa sokuthungwa kwemibala emibili, imfashini kakhulu, futhi sithandwa kakhulu kuzinkundla ezahlukene ze-e-commerce. Ayinawo nje kuphela umqondo wokuklama wesitayela, kodwa futhi iyaqaphela kakhulu ekukhiqizeni. Isendlalelo sangaphandle senziwe ngendwangu yeNayiloni engu-20D 380T enokwelashwa okukhethekile. Inomsebenzi wokudwengula ukumelana namanzi, okulungele ukugcinwa kwansuku zonke nokuhlanzwa. Indwangu yangaphakathi isebenzisa i-20D 380T polyester fiber, enokutholakala komoya okuhle, ithambe kakhulu futhi ikhululekile ukuthintwa. Ukugcwaliswa kwangaphakathi kudada phansi okungu-90% kanti isisindo sokugcwalisa singu-800g.
Imvilophi Eyodwa Isikhwama Sokulala Esinombala Oqinile weSentwasahlobo neKwindla
Lesi sikhwama sokulala sithuthukiswa ngesisekelo semvilophu yokulala yakudala, elungele kakhulu imindeni ethanda ukukhempa entwasahlobo nasekwindla. Isendlalelo sangaphandle salesi sikhwama sokulala senziwe ngendwangu yeNylon emelana nezinyembezi engu-20D 380T, futhi iphethwe ngamanzi okuxosha amanzi, amelana nokungcola futhi kulula ukuwahlanza ngesikhathi sokusetshenziswa; indwangu yangaphakathi yenziwe nge-fiber ye-polyester engu-20D 380T, ethambile futhi ethambile uma uthinta.